‘शीप सिकेर विदेश जानु राम्रो’
कैलाश न्यौपाने,प्रबन्ध निर्देशक Creast Education कन्सलटेन्सी नेपालीयुवा युरोप अमेरिका जाने भनेपछि मरिहत्य नै गर्छन । कति पढनका लागि त कति राम्रो दाम कमाउने दाउमा विदेश छिर्न खोज्छन र उतै सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र घरजम गर्ने धेरै नै छन् । अपवाद कैलाश न्यौपाने त्यस्ता युवा परेनन् जो ६/७ वर्ष वेलायत बसेर (Master’s Degree) गरेर नेपाल फर्किए । र, चावहिलमा Creast Education कन्सलटेन्सी चलाएर बसेका छन् । उनी भन्छन ‘अहिलेको समय प्रविधिको हो, त्यसैले युवाहरुलाई दक्षएवम् प्राधिकशीपउपलब्ध गराएरमा देश भित्र र वाहिर उत्तिकै अवसर प्राप्त हुन्छ ।’
युरोप अमेरिका भनेपछि नेपाली शिक्षित युवामा क्रेज निकै वढेको देखिन्छ ? किन होला ?
हो, नेपाली युवा त्यसमा पनि शिक्षित, प्लस टु, व्याचलर र मास्टर गरेर पनि विदेश जाने मोह बढेको देखिन्छ । नेपालमा पहिला त जागिर खाँचो छ, जागिर पनित्यति सुरक्षित नभएपछि उनीहरु विदेश जान वाध्य छन् । विदेशिए पनि शीप प्रविधि सिकेर नेपाल फर्के मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ । तर,कतिपय उतै सेटेल हुन्छन र सानोतिनो रोजगारीमा रमाएका पनि देखिन्छन् । यसले मुलुकलाई घाटा पुगेको छ । तयारी जनशक्ति विदेशिनु राम्रो होइन ।
तपाईँको कन्सल्टेन्सीबाट विदेश जाने कति छन् ?
हामीले चाहि युरोपियनमुलुकहरुमा साईप्रस र अष्ट्रेलिया र यताजापान पठाउँदै आएका छौं । हामीले २ओटा भाषामा जापानिज र IElTS मात्र अध्यापन गराउँदै आएका छौं । विधार्थीको फ्लो राम्रै छ, हामीउनीहरुलाई दक्ष बनाएर पठाउने गर्छौ । कन्सल्टेन्सी खोल्नुको मुख्य उद्देश्य चाहि के हो नि ? यस कन्सल्टेन्सीबाट जाने विद्यार्थीहरु विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपाल नै फर्केर आउनभन्ने मान्यता हाम्रो हो । उता बाट सिकेको सीप नेपालमा प्रयोग गरे मुलुकलाई पनि फाइदा पुग्छ । त्यसैले विदेश जानेहरुलाई विभिन्नखाले शीप मुलक ज्ञान दिन्छौं जसले उनीहरुलाई त्यहाँगएर काम गर्न सहज होस् ।
यो कन्सल्टेन्सीमाअध्ययनगर्न आउने व्यक्तिकुनवर्गका छन् ?
अहिले विदेश जाने अधिकाशं मध्यमवर्गको मानिस जो नेपालमा पढ्छन तर यहाँको वातावरण सुहाउँदो हुदैन र कामगर्ने वातावरण नपाएपछि विदेशिन वाध्य छन् ।
विदेश जाने विद्यार्थीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
विद्यार्थीविदेश खासमा पढ्न जाने हो । कामको सिलसिलामाभन्नुपर्दा विद्यार्थीले पाउने भनेको सानोतिनो कामहो । जो विद्यार्थी विदेश जादै छन् उनीहरुलाई मेरो व्यक्तिगत र कन्सल्टेन्सीकातर्फबाट चाहि सुरुमा सानो र सजिलो कामजुन नेपालमा नै सिक्न सकिन्छ । त्यस्ताकाम जस्तै कफी मेकिङ तालीम, हेयर कटिङ, ब्युटिसियन, वेटर जस्ता तालिम गरेर जाने विद्यार्थीले सजिलै काम पाउछन् ।
प्रकाशित ६ मङ्गसिर २0७४ , बुधबार | 2017-11-22 10:52:55